လည်ယာ ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် အလွဲသုံးစားမှုများ | MoeMaKa Burmese News & Media
– စက်ရုံများအား ငှားရမ်းရာတွင်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ သတင်းစာထဲမှ တင်ဒါခေါ်ကာ အချိန်(၇)ရက်သာ ပေး၍ ငှားရမ်းပါသည်။ ငှားရမ်းမည့်ကုမ္ပဏီမှလည်း တင်ဒါကြော်ငြာ မပါမှီကပင် မြေတိုင်းခြင်း၊ အခြားနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအား တစ်ဆင့်ပြန်လည်ပြသခြင်းများ ပြုလုပ်နေခြင်းသည် နဂိုကပင် စည်းဝါးရိုက်ထားမှန်း သိသာနေပါသည်။
– ဝန်ကြီးဦးမြင့်လှိုင်သည် မိဘအမွေပေးထားသော ခိုင်းနွားများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးမချဘဲ မသုံးတတ်ဘဲ သားသတ်သမားလက်သို့ ရောင်းချစားသောက်နေသူနှင့်တူသော ပြည်ဖျက်ကိုယ်ကျိုး ရှာသူဖြစ်နေပါသည်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ, မှတ်စုမှတ်တမ်း
4 Responses to လည်ယာ ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် အလွဲသုံးစားမှုများ
Ko Phyaunt on January 16, 2013 at 9:31 pm
ခုချိန်မှာတော့ ခင်ဗျားပြောတဲ့နွားပွဲစားလည်း ပြုတ်သွားပြီး ၊ ဆက်လုပ်ရမှာက နိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းပြီး သူတို့နိုင်ငံကတင်သွင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတာမျိုးကတော့ နိုင်ငံအတွက်အလွန်ထိခိုက်တဲ့ အတွက် လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိ ပါဘူး၊ ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ပါမယ်၊ YIG နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်တွေကို ပွင့်လင်းမြင်သာပေါ်ထွက်လာဖို့ ဦးစွာဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်၊ သိသူများ ဖော်ထုတ်ပေးကြပါဦး၊ ပြီးရင် ပြန်သိမ်းခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်လုပ်စေခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် လျော်ကြေးပေးစေခြင်း တစ်ခုခုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်၊ သိသူအားလုံး ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ကြပါစို့။
winkyqueen on January 18, 2013 at 3:12 pm
sammsoung on January 18, 2013 at 6:26 pm
Aung Ye' Myint on January 19, 2013 at 10:49 am
ဲကြားဖူးလား. ပန်းပန်လျက်ပဲ. လေ. အရင် တခါ တုန်းက Hot News JOURANAL တွေမှာ ပါပေမဲ့အေးဆေးပဲလေ.
IRRAWADY BLOG အရ ဆိုရင်တော့ အဘ နာယကကြီး (ဦးစိုးသိန်း) နဲ့ အမြဲတိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်လို့ နေမယ်လေ. ခုလဲ လယ်/ဆည်မှ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်သူ စာရေးသူကို ဖားတုလို့ ခ၇ုခုန် လို့ ပြောကြလိမ့်မယ်.မောတာပဲ၇ှိလိမ့်မယ်.
သူက ရှေ့ကနှစ်ဦး ထက် POWER ကြီးတယ်